HOYGA ARRIMAHA BULSHADA
Webseedka DALSAN24.COM Oo Hawada Soo Galay.
Waxaa mahad oo idil ay usugnaatay ALLE (swt) oo inoo fududeeyay inaan waxbarano, waxaa kale aan umahadcelinaa macalin Maxamed Cal Aqoonkaal iyo webseedkiisa Aqoonkaal.com oo iisahlay inaan manta webseedkaan hanaanka sare leh inaan suubiyo .
Webseedka Aqoonkaal.com waa webseed-ka ugu sareeyo webseedyada eey leeyihiin Soomaalida oo badankoo da ka hadla siyaasad,qabyaalad iyo waxyaabo anshaxa aan ku fiicneen , waxaan leeyahay Injineer Maxamed Cali iyo dadka taaba galiyay manta in webseedka Aqoonkaal.com laga barto cilmiga kumbiitarka inoo Alle uu siiyo ajar aan lasoo koobi Karin waxaan urajeeynaa farxad iyo guul,
, waxaan ku dhiiro gelinaa ineey ineey sii wadaan howsha qiimaha iyo qaayaha badan oo ay uhaayaan umada Soomaaliyeed. Anagana inaan ku eeysano walaalaheen Aqoonkaal.com oo aan dhinaca cilmi faafinta aan ka qeeyb qaadano Insha Allaah. Maanta umadeena uma baahna kahadalka siyaadahan isqalafsan horay ayeey uga soo dhergeen waxa kaliya oo ay ubaahanyihiin waa in laga hisaa anagana diyaar ayaan unahay dadaalkeedana waan wadnaa Sii Akhri...
Mowduucyada Webka Uu Ka Tarjumayo.
Webkaan haduu Alle yiraaahdo waxuu ka qeyb qaadan doonaa horumarinta waxbarashada jiilka cusub, iyo umadda Soomaaliyeed xirfadeyntooda xaga Teknolojiyada oo uu Adduunka qanigan 21_aad uu kukala hormaray.Alle waxan ka rajeynaa inuu igu garabsiiyo.
Webkaan wuxuu sidoo kale uu kahadli doonaa Hadduu Alle Yiraahdo Arrima Bulshada gaaar ahaan Arrimaha umaddeena Soomaaaliyeed sida horumarka kusoo kordhay wadanka iyo xaalada uu ku sugan yahay wadanka oo idil kasoo biloow Raas Caseeyr ilaa iyl Raas Kambooni.
Waxaan kaleoo aan jeclahay inaan uga hadlo sida ciyaaraha gaar ahaaan kooxda aan jeclahay ee Manchester United, wuxuu kaloo kahadli doonaa ciyaaraha dalkeena sida Horyaalka kasocda Stadiu Koonis ee magaaa Muqdisho.
Daawo Muuqaalka Shaafici Yare
Halkaan waa sidebar
Dhinacaan waxaa loogu talo galay xogyaasha qaaska ah sida xayeeysiimaha iyo animeeshanada, sidoo kale halkaan waxaa lagu qori karaa Facebook page-kaaga iyo Twitter Page-kaaga iyo Youtube haddaad kuleedahay page.
Waxaa mahad oo idil ay usugnaatay ALLE (swt) oo inoo fududeeyay inaan waxbarano, waxaa kale aan umahadcelinaa macalin Maxamed Cali Aqoonkaal iyo webseedkiisa Aqoonkaal.com oo iisahlay inaan manta webseedkaan hanaanka sare leh inaan suubiyo .
Designed By: MOHAMED SOMALI